Mpanamboatra Cup Mangatsiaka Mangatsiaka PET - China Factory Cold Beverage Cup Factory & mpamatsy
Ny kaopin'ny PET an'ny COPAK dia fanarahan-dalàna 100% amin'ny sokajy Sakafo. Ny fizotry ny famokarana rehetra dia vita amin'ny atrikasa madio tsy misy vovoka. Ary ny copak dia nandalo Certification FDA / BRC / QS / SGS / LFGB / ISO9001.
COPAK-PET Cup dia tsara endrika, mateza maharitra, azo antoka ampiasaina, salama amin'ny sakafo. Maimaimpoana ary tsy misy poizina ny BPA 100%. Ny kapoakanay PET dia manintona ny tanora sy ny beantitra noho ny volony.
1.Color: Crystal-mazava na maro loko pirinty
2. Fitaovana: Polyethylene Terephthalate (PET)
3. Sarony: sarony fisaronana na rakotra dôma
4. Fampiasana: zava-pisotro mangatsiaka, zava-pisotro, kafe misy ranomandry, voasarimakirana, dite bubble / Boba, ronono, ronono mangatsiaka, rano, soda ary ranom-boankazo.
5. fonosana: 25 pcs / tanany, tanany 20 / CTN
6. MOQ: 30000 pcs (Ny habetsany, ny vidiny ambany)
7. Seranana: Ningbo na Shanghai, Sina
8. Fahafahana: 12Oz misy 375ml, 340ml na 350ml
Kofy plastika PET miaraka amin'ny sarony
Shanghai COPAK indostria Co., LTD dia orinasa matihanina amin'ny tavoahangy PET sy kaopy PET any Sina. Ho an'ny PET CUPS dia manana izahay Kaopy plastika PET misy sarony na tsy misy sarony.
Mikasika ireo kaopy PET dia manana 5oz, 7oz, 8oz, 9oz, 10oz, 12oz, 13oz, 14oz, 15oz, 16oz, 20oz, 24oz izahay ary iray hafa. Ny savaivony ambony dia miovaova amin'ny 74mm ka hatramin'ny 98mm. Lazao fotsiny aminay ny habeny sy ny fahaizanao ilainao, dia hatolotray anao ny kaopy PET mety aminao.
Raha ny sarony, ny sarom-bilany malaza indrindra dia ny fonosan'ny DOME sy ny rakotra fisaka. Manana sarony misokatra antsasak'adiny koa izahay, sarony tsy misy mololo, sarom-bera tantely sns. Asehoy anay fotsiny ilay ilainao. Ny vidiny dia azo tononina miaraka amin'ny kaopy plastika PET.
Ahodin-toerana ny sisin'ny PET PLASTIKANTSIKA PET. Milamina ny vava. Tena azo antoka ny fisotroana azy. Ny savony rehetra dia natao arakaraka ny savaivony sy ny vavan'ny PET CUP TOP, mifanitsy tsara izy ireo ary miantoka tsy misy famoahana ny kaopy plastika PET izany.
Kaopy plastika 12oz
Fitaovana: fitaovana PLA sy PET
Volume: Kaopy plastika 12oz 340ml / 350ml na 375ml
Logo: COPAK na logo natokana ho an'ny daholobe azo ekena
Volavola: OEM / ODM
Fe-potoana fandoavam-bola: T / T; L / C; West union
Ny kaopy plastika 16oz malaza indrindra any Copak dia an'ny fitaovana PET. Ny antsipiriany momba ny habe sy ny habe dia toy izao manaraka izao.
Kaopy PET 32oz
Loko: loko mazava na namboarina
Logo: Azo ekena ny sary namboarina
Fotoana fanaterana: miankina amin'ny zavatra takinao sy ny habetsahany.
Mari-pankasitrahana: ISO9001, BRC, FDA, LFGB, QS
Andininy momba ny Kopa PET 30oz dia toy ny eto ambany,
Ao Copak, 92mm kapoaka PET dia vita sonia amin'ny boky isan-karazany. 5oz misy 200ml, 7oz misy 200ml, 8oz misy 280ml, 9oz misy 275ml, 12oz misy 375ml ary 12oz misy 340ml, 14oz misy 460ml, 16oz misy 580ml dia natao ho an'ny savaivony 98mm ambony. Anisan'izany fa tsy voafetra amin'ireo volavola sy savaivony ireo dia azonao atao ny mahita ny habeny sy ny habeny ao amin'ny COPAK.
95mm kapoaka PET
95mm kapoaka PET dia misy amin'ny haben'ny 8.5oz, 10oz, 12oz, 13oz, 16oz, ary 24oz. COPAK'S95mm kapoaka PET dia natao hifanaraka amin'ny rakotra savaivony 92mm ka raha mitady kaopy plastika misy sarony ianao dia manana safidy maromaro mifototra amin'ny zavatra ilainao koa ny copak. Misafidiana amin'ny tsipika fisaka, dome na tsy misy mololo! Ny malefaka ny safidin'ny fonony miaraka95mm PET kapoaka manampy amin'ny fitazonana ny lisitra izay mahatonga azy ho fanampiny tsara amin'ny tahiry famatsiana trano fisakafoanana.
Ny famolavolana kapoaka tsy manam-paharoa sy manokana "COPAK" dia mety indrindra amin'ny dite bubble mangatsiaka, zava-pisotro misy voankazo, ronono, ronono, kafe ary malama. Ny fanontana "Good Times" dia 360-manodidina-rehetra ary manazava ny andronao miaraka amin'ny voninkazo voaravaka tsara a 9PET 5mm kapoaka. Tonga lafatra amin'ny fahalavoana, na amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona! Iray amin'ireo volavolan-kaopinay malaza indrindra.
Kaopy 98MM PET
COPAK'S Koban'ny PET 98mm dia natao hifanaraka amin'ny rakotra savaivony 98mm ka raha mitady kaopy plastika misy sarony ianao dia manana safidy maromaro mifototra amin'ny zavatra ilainao koa ny copak. Misafidiana amin'ny tsipika fisaka, dome na tsy misy mololo! Ny malefaka ny safidin'ny fonony miaraka98mm PET kapoaka manampy amin'ny fitazonana ny lisitra izay mahatonga azy ho fanampiny tsara amin'ny tahiry famatsiana trano fisakafoanana.
Ao Copak, Koban'ny PET 98mm dia vita sonia amin'ny boky isan-karazany. 12oz miaraka amin'ny 360ml, 14oz misy 400ml, 16oz misy 500ml, 20oz misy 610ml, 24oz misy 690ml ary 700ml dia natao ho an'ny savaivony 98mm ambony indrindra. Anisan'izany fa tsy voafetra amin'ireo volavola sy savaivony ireo dia azonao atao ny mahita ny habeny sy ny habeny ao amin'ny COPAK.
Kopa Plastika Maimaimpoana BPA
Ny Bisphenol A (BPA) dia fitambarana syntetika biolojika misy raika simika (CH3) 2C (C6H4OH) 2 an'ny vondrona derivatives diphenylmethane sy bisphenols, miaraka amina vondrona hydroxyphenyl roa. Izy io dia solid tsy misy loko izay mety levona amin'ny solvents organika, fa tsy mety levona anaty rano (0,344 wt% amin'ny 83 ° C).
Shanghai Copak indostria Co., LTD dia manome vahaolana sy serivisy ho an'ny fahasalamana lafo vidy sy avo lenta ho an'ny indostrian'ny fikarakarana, fivarotana kafe marika, fivarotana dite misy ronono, trano fisakafoanana, hotely kintana, biraon'ny orinasa, tokantrano avo indrindra.
Ny vokatra lehibe COPAK dia tavoahangy PET PET,Kaopy PET PET, Kaontenera PET, fitoeram-biby PET. Ny vokatray dia ampiasaina amin'ny sakafo, zava-pisotro, voankazo, fitaovana, kilalao, asa-tanana, kosmetika, fanomezana, fanafody, vokatra salama, filàna isan'andro ary fonosana fitaovam-pitaterana. Afaka mahita izay ilainao amin'ny orinasa izahay.
Mpanamboatra Cup any China
Shanghai COPAK, fantatra amin'ny anarana hoe mpanamboatra kaopy PET PET, natsangana tamin'ny 2010. Ny kaopy PET an'ny COPAK dia fantatra amin'ny toetrany matanjaka sy ny fahaizany mitahiry ny tsiro, ny endriny ary ny endrika ivelany amin'ny vokatra. Safidy mahafinaritra izy io ary ny fahazavan'ny kaopy dia manatsara ny fisehon'ny ao anatiny.
Ny kapoakanay PET dia ampiasaina amin'ny sotasota, ranom-boankazo, kafe mangatsiaka, fikororohana ara-pahasalamana, tsindrin-tsakafo, fifangaroan'ny voanjo sy voankazo, confectionery, ranomandry notorotoroina, zava-pisotro mahery sy zava-pisotro misy alikaola.